Wax Badan Ka Barro Hababka Ugu Wanaagsan Ee Ilkahaaga Dhalaal Iyo Caafimaad Ku Heli Karaan.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Wax Badan Ka Barro Hababka Ugu Wanaagsan Ee Ilkahaaga Dhalaal Iyo Caafimaad Ku Heli Karaan..
Published: September 5, 2016, 2:24 pm
(0) Comments Iyada oo ay inta badan dadku aad u jecel yihiin inay ilkahoodu noqdaan kuwo aad u cad cad ayay culimo dhinaca caafimaadka Ilkuhu soo sameeyeen dhowaan daraasad cusub oo ay ku baadhayaan hababka ugu fudud ee loo cadayn karo Ilkaha.
Natiijo hor dhac ah oo ay khubaradaasi soo saareen dhowaan ayay ku sheegeen inay jiraan ilaa afar waddo oo loo cadayn karo ilkaha,iyada oo la isticmaalaayo waxyaalo kala duwan, kuwaas oo aad u cadayn kartid adiga oo jooga gurigaaga.
Afartan hab ayaa kala ah sidan soo socota:-
1: Bi Carbonate: habkan ayaa la isticmaalayaa iyada oo Carbon maadada loo yaqaano lagu daraayo maadada Soda loo yaqaano, sidoo kalena waxa la isticmaalayaa malqaacad Shaah ah , taas oo ay ku laman tahay Hydrogen Peroxide,waxa kale oo lagu darayaa laba malqaacadood oo Bi Carbonate ah, Waxaana walxahan la isticmaalayaa toddobaadkiba laba jeer, waana la huurinayaa maadooyinkaasi laysku dar daray.
2: Saliida Qumbaha:Saliidan ayaa iyaduna ah mid cadaan ka dhigta Ilkaha ,waxaanay sidoo kale ka dhigtaa Ciridka qofka mid cadaan ah, Waxaanay cadaan ka dhigtaa ilkaha, waxa kale oo ay ciridka ka dhigtaa mid ka madhan xashiish ama qashinka keena inuu nabaro yeesho iyo inuu bararo oo xanuun sameeyo.
3: Colgate: Waa waxyaalaha inta ugu badan loo isticmaalo in lagu cadaydo ,kaas oo laga helo caafimaad dhanka Ilkaha ah ,isaga oo dila waxyaalaha Jeermisku kamidka yahay ee ilkaha gala,waxa kale oo uu ka hortagaa ilkaha oo qofka dhiig sameeya.
4: Saliida Tufaaxa: waa saliid inta badan laga tuujiyo Tufaaxa midhihiisa,waana dareere habka saliida loo sameeyo,laakiin maaha saliid sax ah,waxaanu kamid yahay waxyaalaha sida fudud loogu cadayn karo ilkaha,iyada oo sidoo kalena lagaga badbaadi karo Bacteria-da ilkaha iyo ciridka ku dhalata, iyada oo faa’ido badan u leh qaybta dhuuxa ah ee ilkaha,taas oo ah ta keenta inay ilkuhu cadaan noqdaan.
Afartan hab ayaa ah hababka ay qoraal kooban oo ay kusoo qoreen khubaradani Wargeyska Daily Mail oo uu qormadan kazoo xigtay wargeyska Dawan ku sheegeen inay yihiin hababka ugu fudud ee ay dadku ilkohooda uga dhigi karaan kuwo aad u cad oo dhalaalaaya , sidoo kalena ugaga badbaadi karaan inay kiimikooyin isticmaalaan.
« Warbixinta Ka HoreysaySariirta ayey dhinac kaga Fadhiday, isaguna markaas ayuu Guriga soo galay.	Warbixinta Xigto »Sheeko Xiiso Badan:- Habboon ma Jinbaa? Q2AAD W/Q: Cabdiraxmaan Maxamed Axmed (Warmooge)	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Comments are closed.